Natiijada doorashadii Västra Götaland & Örebro | Somaliska
Natiijada doorashadii shalay lagu celiyay gobolada Västra Götaland iyo Örebro ayaa soo baxday iyadoo xulufada uu hogaamiyo xisbiga SocialDemokraterna ay ku guuleysteen cododka inta badan. Gobolka Västra Götaland ayay heleen 45.8%, halka xulufada Dowlada ee uu hogaamiyo xisbiga Moderaterna ay heleen 42.3%, iyadoo xisbiga cunsuriga ah ee SverigeDemokraterna ay heleen 5.8 Kuraasta gobolka Västra Götaland ayaa waxaa loo qeybsaday SocialDemokraterna iyo xulufadooda oo kala aah Vänsterpartiet iyo Miljöpartiet ayaa helay 73 kursi, Xulufada dowlada ayaa helay 67 kursi. Cunsuriyiinta SD ayaa qaatay 9 kursi. Dhinaca kale, doorashadii ka dhacday Örebro ayaa waxaa carabka u dhigtay xisbiga SocialDemokraterna iyagoo ku guuleystay 47.1 halka xisbiga Moderaterna ay heleen 20% oo keliya. SD ayaa helay 5,6% oo u dhiganta 1 kursi. Si kastaba ha ahaatee doorashada ayaa la dhaliilay ka dib markii la sheegay in tirada dadka ka qeyb qaatay ay aad u yaraayeen oo lagu sheegay 43% . Doorashadaan ayaan ahayn mid baarlamaanka kuraas looga helayo ee waxay ahayd doorashada gobolka iyo mida degmooyinka.
Natiijada doorashadii shalay lagu celiyay gobolada Västra Götaland iyo Örebro ayaa soo baxday iyadoo xulufada uu hogaamiyo xisbiga SocialDemokraterna ay ku guuleysteen cododka inta badan. Gobolka Västra Götaland ayay heleen 45.8%, halka xulufada Dowlada ee uu hogaamiyo xisbiga Moderaterna ay heleen 42.3%, iyadoo xisbiga cunsuriga ah ee SverigeDemokraterna ay heleen 5.8
Kuraasta gobolka Västra Götaland ayaa waxaa loo qeybsaday SocialDemokraterna iyo xulufadooda oo kala aah Vänsterpartiet iyo Miljöpartiet ayaa helay 73 kursi, Xulufada dowlada ayaa helay 67 kursi. Cunsuriyiinta SD ayaa qaatay 9 kursi.
Dhinaca kale, doorashadii ka dhacday Örebro ayaa waxaa carabka u dhigtay xisbiga SocialDemokraterna iyagoo ku guuleystay 47.1 halka xisbiga Moderaterna ay heleen 20% oo keliya. SD ayaa helay 5,6% oo u dhiganta 1 kursi.
Si kastaba ha ahaatee doorashada ayaa la dhaliilay ka dib markii la sheegay in tirada dadka ka qeyb qaatay ay aad u yaraayeen oo lagu sheegay 43% . Doorashadaan ayaan ahayn mid baarlamaanka kuraas looga helayo ee waxay ahayd doorashada gobolka iyo mida degmooyinka.
waa wax lagu farxo sida ay u dhacday doorashada . runtiina sidii aanu filaynay ayay noqotay Viva socialdemokrater.